Iincwadi ze-E-ncwadi ze-Android | I-Androidsis
el_uliulius | | Ukusetyenziswa kwe-Android, Tutorials
Ukuba kukho into sikhethe i-Android ngezizathu ezili-10 (okanye ezininzi ngakumbi), enye yezona zinto zibaluleke kakhulu yiNtengiso. Kubathandi beencwadi, abo badikiweyo kuloliwe ongaphantsi okanye esitopini sebhasi, abo bafuna ukufunda kancinane ngaphambi kokuba balale, iMarike inenani elininzi labafundi beencwadi ze-E zezinto abazithandayo. Ezi zezinye zezona zidumileyo, kunjalo ke zininzi. Cofa kwi icon yesicelo ukuya kwiNtengiso kunye nokuzikhuphela.
Igosa lewebhu elisemthethweni kunye nelokufunda incwadi Amazon. Uyakonwabela ikhathalogu engapheliyo yeencwadi ezinazo. Khuphela kwaye ufunde yonke into oyifunayo nokunye. Ngqamanisa nohlobo lwakho lwe-E-Reader ukuba unayo. Ukungancedi: isibonelelo esincinci seencwadi zasimahla, ngesiNgesi, kuya kufuneka wongeze ikhredithi nakwiincwadi zasimahla kwaye ikuvumela ukuba ufunde iincwadi ezikhutshelwe kwiAmazon. Mahala.
Incwadi yokufunda kaGoogle. Esi sicelo siseluhlaza kakhulu kwaye unikezelo lwaso lweencwadi lunqabile. Akafundi zincwadi zangaphandle kwaye ubhalwe ngesiNgesi. Ndiyathemba ukuba le projekthi ayilahlanga kwaye iphela ingumfundi omkhulu weencwadi. Mahala.
Sele uyenzile kwakhona yale nkqubo ilungile kum. Inonxibelelwano oluhle kakhulu, nangona uhlaziyo lwamva nje lweSpanish lulayishwe kunxibelelwano kwaye kubonakala ngathi alusebenzi neGingerbread (abanye bethu sele benayo kwisiphelo). Isibonelelo esikhulu seencwadi zasimahla kunye nokufunda i-ePub yethu esinayo kwi-SD. Zimbini iinguqulelo, inye simahla kunye nomnye yentlawulo.
INyanga + Reader
Unomdla obonakalayo onomdla. Isebenza kumacwecwe kakuhle nangona ingafundi iPDF njengoninzi. Ikhathalogu yeencwadi zasimahla kunye neSpanish zilungile. Iimenyu zinokudityaniswa kwaye kunzima ukuyiqonda. Isicelo esigqibeleleyo ngokwemigaqo Abafundi bePDF. Nika ingxelo yentlawulo ngezinye iindlela ezimbalwa, ukongeza kuhlobo simahla kungafunwanga ntlawulo.
Nokuba yeyiphi na into enegama, elinayo, ngokubonakalayo inomtsalane. Ikhathalogu yeencwadi zasimahla sele yandisiwe, inento esele inayo ngoku ngeSpanish. Isixhobo esibonakalayo ngesiNgesi ngoko kwabanye kuya kuba yingxaki. Ayibonisi nantoni na (ngaphandle koopopayi xa uvula amaphepha umzekelo) abanye abangazinikisiyo ngeencwadi ezininzi okanye ngeSpanish. Mahala kwiNtengiso.
Egqibelele. Akukho frills okanye ujongano olugcweleyo oluzele yimizobo. Funda iPDF, ePub nayo yonke into onokuyicinga. Akukho nto yokwenza. Ukhetha incwadi yakho kwaye iphelile. Xa uvula inkqubo, igcina iphepha owawukulo. Ibandakanya umsebenzi wokukhangela onomdla kakhulu. Ukongeza ekusebenzeni ngokufunda ebusuku, kuthi abo bathanda ukufunda ebhedini bayakuxabisa. Iyacetyiswa kwaye simahla kungafunwanga ntlawulo.
Ndikushiya ezinye izikrini, kwaye ukhethe ukuba yeyiphi oyithandayo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Iincwadi ze-E-ncwadi ze-Android
Igama elinomdla, ngakumbi abo bangafundanga abangakhange bafunde "iihambo zikaGulliver."
UTofol Loko sitsho
Ikwaligama lenqaba evela kwimovie El Castillo En El Cielo
Phendula Tofol Loko
Emva kokuvavanya uninzi lwazo, ndinamathela kwiFBreader. Yamkela iPub, Fb2 kunye ne-Oeb. Ukuhlaziywa rhoqo okungadingi ukuphinda kuqwalaselwe usetyenziso. Ngezinto ezimbalwa zokuhombisa ezibonakalayo kodwa zezona zinokungasebenzi kakuhle okumbalwa.
Kwaye, ulibele into elula: I-WordPlayer enesibonelelo esibalulekileyo kwaye kukuba inxibelelana ngokumangalisayo nesoftware yolawulo lwe-ebook, ke kulula kakhulu ukudlulisa iincwadi kwisixhobo.
Thelekisa kakuhle kakhulu!
Ndisebenzisa iAldiko, yeza ngokusemgangathweni nge-SGS.
Nangona ndizimisele ukuthenga i-Kindle eReader kwiAmazon, ndiza kufaka usetyenziso lwayo olusemthethweni ukubona ukuba inika uhlobo oluthile lokudityaniswa phakathi kwezixhobo ezi-2. Kuya kuba kuhle ukufunda kuhlobo rhoqo, kodwa sikwazi ukulandela ukufundwa kwi-Android ngalo naliphi na ixesha esingayiphathi ngesandla i-eReader.
I-FBReader ayixhasi iifayile ze-pdf.
I-FBReaderJ ixhasa iifomathi ze-e-ncwadi ezahlukeneyo: oeb, epub, fb2. Ekukhutshweni kwexesha elizayo uluhlu luya kwandiswa ukuxhasa iifomathi ezifanayo ne-FBReader yoqobo. Ukufunda ngokuthe ngqo kwi-zip, tar kunye ne-gzip koovimba kuyaxhaswa.
Ndithengile inyanga + yokufunda pro, kwaye ndiyaqhubeka ukuba nengxaki efanayo kwasekuqaleni. Ndingalikhetha njani igama kwaye lindixelele intsingiselo yalo ngaphandle kokuqhagamshelwa kwi-intanethi? Kukho inkqubo yokufunda eyenzayo, kuba ngaphandle kweintanethi andinayo.
Silindele ngolangazelelo impendulo.
Ngaba ikhona indlela yokukhuphela iincwadi ngeSpanish kwifbreader? okanye ukuguqula ezo zesiNgesi?
UFernando Miguel ZL sitsho
Ndine-tablet engama-7700 andikwazi ukufunda iincwadi zam.Yiphi inkqubo endiyifunayo kwinkqubo yokufunda iifayile ze-pdf?
Phendula uFernando Miguel ZL
Molo, ndinamathandabuzo aliqela, ndifuna ukuthenga i-ebook kwaye bendifuna i-mercadolibre. Ndacinga ukuba umntu ovuthayo unokuzikhuphelela iincwadi ezikhutshelweyo simahla, umzekelo, kwi-Intanethi, okanye adlulise ezo ndinazo kwikhompyuter. Ndaye ndacinga ukuba ndizokwazi ukufunda amanqaku kwi-faculty. Ngaba inkqubo eza kunye nohlobo inokutshintshwa? Yeyiphi incwadi oyincomayo? Ngaba ezi nkqubo ze-Android zeeselfowuni ezine-android? kwaye iyafana nokuba ne-ebook? (tshintsha nje isikrini?) Ndiyathemba ukuba uyandiphendula, enkosi.
Molo apho! Ndikhangela ilayibrari yeencwadi ezikhethekileyo kubantwana be-Android. Ndijonge amaxabiso kwaye ndifumana kuphela izihloko ezizodwa kwintengiso (isibonelelo esincinci, nangona sinexabiso elihle):
Ngaba ikhona ivenkile yeencwadi enexabiso elifanayo kunye nohlobo olufanayo lwencwadi yabantwana?
Ndizamile ezininzi kwaye ndihlala noMantano, ikwimakethi, isimahla kwaye enye ihlawulwe, funda i-pdf, epub, txt ...
iyavumelanisa neefolda zam ze-ebook kwaye ine-suite yezixhobo ezimangalisayo. Xa ndidiniwe ndifaka ii-headphones andifundele incwadi ngelixesha amehlo am ephumle ... yintoni enye endinokuyicela ...
Molo apho! Ndisebenzisa iMantano kwaye ngokunyaniseka ayindiniki ngxaki (ndimtsha kakhulu kule) kodwa ndiyikhuphele ngokuchanekileyo ngenxa yomxholo othi "umbhalo ukuya kwintetho" kodwa andikwazi ukuyenza isebenze! Ndiyayithanda kuba ndinengxaki yempilo kwaye andinakuhlala kwindawo enye ixesha elide, kwaye ukufunda kuya kundinceda. Ungandinceda ukusombulula ingxaki yam? Ndibhalile ndabuza kwiindawo ezahlukeneyo kodwa abaphendulanga. Enkosi!!
Molo, ndifuna ukwenza ingcaciso. Utsho ukuba i-FBReader ifunda yonke into kubandakanya nePDF; kodwa ndiyifakile kwiAndrid yam kwaye ayizukuvula, ayindivumeli nokuba ndibone iincwadi zepdf endinazo ekhadini okanye emnxebeni.
Ungandixelela ukuba kutheni okanye yimpazamo ethile kuqwalaselo lwayo?
Ndizifundile ezinye iiblogi kwaye bathi le nkqubo intle kakhulu, ayifundanga pdf.
I-PS: umntu oza kundiphendula kungekudala.
Igama elingaziwayo sitsho
I-Aldiko iyafana kwinkcazo yethala leencwadi kwi-iBook, kodwa ndiyayithanda i-iOS ngakumbi
Phendula kwigama elingaziwayo
USamuel V. sitsho
Enkosi ngolwazi, ibiluncedo kakhulu kum. U-Aldiko usebenze kakuhle kakhulu kum kwi-lenovo A1.
Phendula uSamuel V.
UAlhonso medrano sitsho
Ndisebenzisa iincwadi zokuya, inyani intle kakhulu, ngaphandle kwesikhalazo
Phendula u-Alhonso medrano
simthobisile i-fbreader kwaye ihamba kakuhle. Enkosi. Inqaku elihle kwaye iluncedo kakhulu
Undenze ndonwaba kakhulu !! Ndithenge ithebhulethi ukuze ndiyifunde ebhasini xa ndisiya emsebenzini ngentsimbi yesi-6 kusasa, kwaye andikwazi ukuqhela imvelaphi emhlophe eqaqambileyo yabafundi! Nge-FBreader kunye nemowudi yasebusuku, ndicinga ukuba yonke into izakuba ngcono kakhulu. Enkosi ngengcebiso.
Imayini yeMunray sitsho
Enkosi kakhulu, bendifuna umfundi olungileyo we-android 😀
Kwaye i "FBReader" yile nto bendiyifuna ... Iyandivumela ukuba ndifunde kwimemori yam okanye isixhobo kwaye ine-plugin evumela ukufundwa nge-TTS. kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa, eyona nto ndiyithandayo kukuba igcina apho ndayeka khona nokuba ndisebenzisa iplagi ye-TTS. Igqibelele! Enkosi! 😀
Phendula uMina Munrray
UJose Maria de Pereda sitsho
Kububuxoki ukuba i-FBReader ifunde iPDF. Lowo uzifundayo nguAldiko, kodwa andimcebisi njengomfundi, umbi kakhulu. Okona kulungileyo kude, ukuba sifuna ukufundwa okumnandi, YINYANGA + UMFUNDI, kananjalo ngombono wasebusuku (ukhululeke ngakumbi kune-FBReader) kunye nonxibelelwano olungcono. Okulandelayo kuya kuba yi-FBReader, kodwa kumgama omde.
Phendula kuJosé María de Pereda
Umbandela wokungcamla: / Andiyithandi nayiphi na kwezi zikhankanyiweyo, zindenza ndimbi kakhulu, ndinzima kakhulu, ndinemisebenzi engenamsebenzi kum. Abanye abade bafunde ikhadi le-SD, kunye / okanye bakope iincwadi kwenye ifolda ethatha indawo engaphezulu (xa uneencwadi ezingaphezulu kwama-300 ezifunxa).
Ndisebenzise "iPub Reader ye-Android" esuka kwiGrafilos Studio okwethutyana, endiyithandayo kodwa ndigcina ikopi yeencwadi.
Andifane ndisebenzise i-Text Reader kwiifayile ze-txt kunye ne-rtf, kwaye ngamanye amaxesha ndisebenzisa i-All Reader kukhetho lwe-tts, kodwa kuyo yonke enye into andiyithandi i-app.
Endihlala ndiyisebenzisa kwaye ndiyithanda kakhulu yi-EPUB Reader ephuhliswe nguMichael Volz, inobunzima be-1,45 MB. Ndiyathanda kakhulu ukuba incinci kwaye ineziseko ezisisiseko kuphela. Ekuphela kwento engekhoyo kuluvo lwam ziitsts.
Ukuba nabani na uyazi ngesicelo esincinci, esilula kunye nesicelo esifana ne-EPUB Reader, ndingayivuyela impendulo yakho apha.